हामीलाई स्पष्ट बहुमत दिनुहोस् हामी हाम्रो प्रतिबद्धताअनुरुप काम गरेर देखाउँछौं – Kathmandutoday.com
हामीलाई स्पष्ट बहुमत दिनुहोस् हामी हाम्रो प्रतिबद्धताअनुरुप काम गरेर देखाउँछौं
काठमाण्डु टुडे २०७० कार्तिक ३ गते ६:२२ मा प्रकाशित
हामीले प्रतिबद्धतापत्र भन्नु र घोषणापत्र नभन्नुको कारण नै हामी जे भन्छौं त्यो गर्छाै भन्ने विश्वास दिलाउन र आफैलाई घच्घच्याइ रहनका निम्ति हामीले घोषणापत्रको सट्टा प्रतिबद्धतापत्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छौं । हामीले इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट प्रतिवद्धतापत्र ल्याएका छौं । संसदीय पार्टीहरूले चुनावको मुखमा जनतालाई ठूला ठूला कबुलहरू गर्ने र केही पनि पूरा नगर्ने जुन परिपाटी थियो, त्यसलाई तोड्ने माओवादीको परम्परा हो, त्यसलाई पूरा गरेका छौं । जहाँसम्म माओवादीले पनि गरेन भन्ने कुरा छ त्यो सत्य होइन । किनकि माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल त भयो तर उसलाई बहुमत प्राप्त भएन । त्यसैले उसले एकमना सरकार चलाउन पाएन । गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकार त हामीले बनायौं तर अरुको वैशाखी टेकेको सरकार भएकाले आफ्नो पाराले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन पाएन । क.प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको पहिलो सरकारमा म अर्थमन्त्री हुँदा ल्याइएको बजेटलाई विश्वले नै जनमुखी र अहिलेसम्मको उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रमको रुपमा लिइयो । त्यो बजेटलाई हामीले यसरी कार्यान्वयन ग¥यौं कि कसैले परिकल्पना नै गरेको थिए । राजस्वको वृद्धि ३३.३० प्रतिशतका दरले हुन्छ भन्ने कसैले सोचेको पनि थिएन । न इतिहासमा पहिले कहिल्यै भएको थियो, न कहिल्यै हुनेवाला छ । हामीले त्यो गरेर देखायौं । यथार्थ के हो भने हामीले एउटा मात्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पायौं । म प्रधानमन्त्री हुँदा हामीलाई बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएन । त्यसै कारणले गर्दा पनि हामीले भनेका कुरा लागू गर्ने अवसर हामीलाई दिइएन । त्यसैले हामीले नगरेको होइन गर्न नदिइएको हो । यसपटक जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु हामीलाई स्पष्ट बहुमत दिनुहोस् हामी हाम्रो प्रतिबद्धताअनुरुप काम गरेर देखाउँछौं ।
यो दूरगामी भिजनसहितको एजेण्डा हो । यी एजेण्डा प्राप्त गर्न जुन पार्टीको एजेण्डा हो, त्यसलाई बहुमत दिनुपर्छ । जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने नारा हामीले अगाडि सार्नुको कारण पनि यही हो । पहिलो कुरा त हाम्रो पार्टीलाई बहुमत र एकमने सरकार बनाउने आधार तयार गर्नुप¥यो, दोस्रो कुरा हामीले स्थिर र सुशासनसहितको सरकार हुनुप¥यो भनेका छांै । त्यसका निम्ति राष्ट्रपतीय प्रणाली भयो भने पनि कम्तिमा पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउँछ । संसदीय सरकार कुनै पनि बेला संसदले हटाइदिन सक्छ । यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि स्थिर राख्न सक्ने र देश र जनताका सबै समस्या बुझ्ने सरकार बनाउन सकेको सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु ठूलो चुनौती हुँदैन । २ अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ । त्यसका निम्ति गरिएको स्रोत पनि यसपटक हामीले किटानीका साथ यहाँ समावेश गरिएको छ । किनकि २ अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कूल ग्राह्यस्थ उत्पादनको कमसेकम ४० प्रतिशत हाराहारीमा लगानी गर्नु पर्दछ । ४० प्रतिशत हाराहारीको लगानी आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट जुटाएर हामीले कसरी गर्छाै भन्ने स्पष्ट आँकडा त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । त्यसैले २ अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ । हामी त्यो गरेर देखाउँछौं । त्यसको खाका स्पष्टरुपमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौं ।
१५ वर्षमा बेरोजगारीको अन्त्य गर्छाै भन्नुभएको छ, सम्भव छ ?
त्यो सम्भव पनि छ र आवश्यक पनि छ । यतिबेला नेपालको एउटै ठूलो समस्या बेरोजगारी नै हो । यतिबेला हामीसँग ३७ लाख बेरोजगार छन् । यसले गर्दा मान्छेहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने तालिका हामीले बनाएका छौं । पहिलो ५ वर्षमा हामीले १९ लाख रोजगारी सृजना गर्छाै । १९ लाख रोजगारी सृजना गरेर १५ वर्षमा बेरोजगारीको अन्त्य गर्छाै । त्यसका निम्ति कृषि उद्योग, सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्न सक्छौं । अर्काे कुरा युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत् पनि रोजगारको सृजना हुन्छ । यसको स्पष्ट किटानसहित हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं यसरी १५ वर्षभित्र नेपालमा बेरोजगारी शुन्यमा झार्न सकिन्छ । प्रत्येक नेपालीले देशभित्र रोजगारी पाउन सक्छन् ।
तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छाै भन्नुभएछ, कसरी सम्भव होला र तीन वर्षमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्न ?
हाम्रो माग कति हो ? र आपूर्ति कति हो ? त्यसको हिसाबकिताब गरेर पहिलो वर्ष कति घटाउन सकिन्छ, दोस्रो वर्ष कति घटाउन सकिन्छ र तेस्रोमा गएर कसरी शुन्यमा झार्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रक्षेपण गरेका छौं । अहिले ७ सय मेगावाट उत्पादन हुनु र १००० मेगावाट जति आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । त्यो आगामी तीन वर्षमा हाम्रो देशभित्रै साना जलविद्युत आयोजनामार्फत् र पूरा हुन लागेका आयोजनामार्फत् पूरा गर्नेछौं र नपुग विदेशबाट आयात गरेर भए पनि तीन वर्षमा लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्छाै र १० वर्षभित्र १०,००० मेगावाट बिजुली र १५ वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर देशलाई समुन्नतको दिशामा त लान्छौं, लान्छौं र जुन अतिरिक्त बिजुली निर्यात गरेर एक खर्ब बराबरको आम्दानी पनि गर्छाै भन्ने योजना बनाएका छौं ।
पहिलो संविधानसभामा अरुलाई हेयौं पटकपटक, माओवादीलाई हेरौं यसपटक भन्ने नारा निकै चर्चित भएको थियो । यसपटकको मुख्य नारा के छ ?
नारा त ९–१० वटा छन् । यसको सारको रुपमा २–३ वटा कुरा अगाडि सार्न सकिन्छ जब हुन्छ एमाओवादीमा दुईतिहाइ मतदान तब बन्छ देशमा जनमुखी संविधान भन्ने एउटा नारा छ । अर्काे स्थिर सरकार, तीव्र आर्थिक विकास एमाओवादीलाई बहुमत, देशको निकास भन्ने दोस्रो नारा छ । तेस्रो नारा जसको नीति उसको नेतृत्व राष्ट्रको नेता अध्यक्ष क.प्रचण्ड भन्ने नै प्रमुख नारा हुन्छ । कृष्णसेन समाचार सेवाबाट